अचानोमा 'मिस नेपाल' किन?
Aakar May 14, 2009
राष्ट्रिय मुद्दा नै बनेको थियो मिस नेपाल प्रतियोगिता। कोही यो हुनुपर्छ भन्नेमा थिए, कोही हुनुहुँदैन भन्नेमा। यसका विरोधीहरू थिए भने समर्थकहरू पनि कम थिएनन्। प्रतियोगिताका विरोधीहरूको आपत्ति थियो यसले नारीहरूलाई नङ्ग्याउँछ, व्यापारिक वस्तुमा परिणत गर्छ र नयाँ नेपालका नारीहरूको छविलाई विकृत तुल्याउँछ। तिनकै डाँकोले जित्यो भन्नु पर्‍यो। आयोजकहरूले रोइकराइ गरे, प्रधानमन्त्रीसित समेत गुहार मागे। तर केही सीप लागेन। प्रतियोगिता हुन पाएन, रोकियो। मिस नेपाल प्रतियोगिता हिस्स भयो। आयोजकहरू खिस्स परे।
त्यसरी रोकिएको मिस नेपाल प्रतियोगिता अहिलेसम्म हुनसकेको छैन। अझ्ै थर्कमान छन् आयोजकहरू र आँट गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूलाई डर छ विरोधीहरूको मारमुङ्ग्रीमा परिएला भन्ने।
सबैलाई लाग्यो अब सुन्दरी छान्न पाउने यस्ता खालका कुनै प्रतियोगिता कतै पनि कुनै हालतमा हुने छैन।
तर समयले त्यस्तो सोचाइलाई गलत साबित गरिदिएको छ। अहिले के मात्रै प्रतियोगिताको आयोजना हुन बाँकी छ? लौ औंला भाँचि हेरौ!
- शहर सुन्दरीहरूको प्रतियोगिता हुने गरेका छन्, जस्तै मिस धरान, मिस पोखरा आदि।
- क्षेत्रीयस्तरमा सुन्दरीहरू छानिन्छन्, जस्तै मिस पूर्वाञ्चल मिस पश्चिमाञ्चल आदि।
- विभिन्न उमेर समूहका सुन्दरीहरूको चयन हुन्छ, जस्तै लिटिल स्टार, कीड क्वीन मिस टीन आदि।
- जातीय सुन्दरीहरू छान्ने प्रतियोगिता गरिन्छन्, जस्तै मिस नेवा, मिस तमु, मिस तामाङ आदि।
- नितान्त नश्लवादी देखिने मिस मङ्गोल प्रतियोगिता पनि भएकै छ।
- क्याम्पस क्याम्पसमा सुन्दरी प्रतियोगिता हुन्छन् र मिस फलाना क्याम्पस छानिन्छन्।
- अन्तराष्टट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन पठाउनलाई मिस युनिभर्सिटी छान्ने प्रतियोगिताको पनि आयोजना गरिन्छ।
- तेस्रो लिङ्गीहरूको समेत मिस पिङ्क प्रतियोगिता सञ्चालन हुने गरेको छ।
- हुँदाहुँदा मिस मात्र होइन मिसेज नेपाल प्रतियोगिता पनि हुने गरेकै छ।
अनि यी लुकीछिपी गरिने प्रतियोगिता होइनन्। ठूलो प्रचार-प्रसार र उत्तिकै धुमधडाका साथ गरिने प्रतियोगिता हुन्। त्यसनिम्ति समारोह गरिन्छन्, जसबारे तस्विरसहित समाचार छापिन्छन्।
यति भनिसकेपछि एउटा प्रश्न आफ से आफ उब्जन्छ : यी यावत सुन्दरी प्रतियोगिताहरू हुन दिने अनि मिस नेपाल प्रतियोगितालाई मात्र अचानो बनाउनुपर्ने कारण चाहिँ के होला?
नोट: ऋतुराज को ऋतुविचार मलाई निकै मन पर्ने र यो पनि साह्रै घत लागेर, हिमालखबर पत्रिकाबाट साभार गरेर, यहाँ ऋतुराज को विचार राखेको छु है ।
Eternal May 14, 2009 at 8:09 PM
I fully support the ideas of rituraj.. afterall why Miss Nepal was not let to be organised...its just the ones who create halt on it wanted fake publicity....
If Miss Nepal is stopped then why other beauty pagents are going on....
I support Miss Nepal....hehehe
Basanta May 15, 2009 at 5:53 AM
सही कुरा! यो कुरा मलाई पनि खट्कीरहेको थियो। सनक ढोंगले चलेको देशमा यस्तै हो।
wordflows May 15, 2009 at 8:41 AM
ho basanta ji thik ho
एकलकाटे May 15, 2009 at 11:47 AM
Miss Nepal को नाम मा छाला गोरो कपाल लामो बनाउने भनेर सामान बेचेको चाँही मलाई पनि मन परेको थिएन
Sujan Sharma May 15, 2009 at 11:49 AM
ऋतुराज को बिचार मलाई पनि निकै मन पर्‌यो।
अचम्म छ, नेपालको समाजमा। अरु सुन्दरी प्रतियोगिताहरू हुन दिने अनि मिस नेपाल नदिने यो कस्तो समाज हो?
Simon May 18, 2009 at 5:03 AM
Correct. And Miss Nepal is going to be organized soon.
Sujan Sharma November 12, 2010 at 4:26 AM